Qorshe dawladdu ku kala qeybsantay ee quseeya xaafadaha ajaaniibta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qorshe dawladdu ku kala qeybsantay ee quseeya xaafadaha ajaaniibta
La cusbooneeyay torsdag 21 februari 2013 kl 14.37
La daabacay torsdag 21 februari 2013 kl 08.41
Xisbiga Kristdemokraterna, KD ayaa ka biyo diidan qorshaha dawladda ee la xiriira in cashuuraha laga dhimo shirkadaha ka how-gala xaafadaha ey ajaaniibtu ku badan yihiin sida Rinkeby iyo Rosengård, si goobahaa looga abuuro shaqa. Qorshahaasina oo dawladdu soo ban-dhigtay sannadkii 2010.
– Cilmi-baarisyada la sameeyey kama aaney muuqan iney fikirradaa ka abuurmeen shaqooyin hor leh, maadaama uu goolku middaa ahaa. Macnuhu maaha in shirkaduhu isu guurguuraan. In qaar horey u jirey hoowlahooda u raraan xaafadahaa halka ey qaar kalena ka soo raraan, sida ay sheegtay Penilla Gunther, af-hayeenka dhanka is-dhex-galka ee xisbiga KD.
Muddo yar dabadeed doorashadii dalka ka dhacday sannadkii 2010 ayey afarta hogaamiye ee xisbiyada ku bahoobay awoodda dalku soo ban-dhigeen fikir la xiriira in qidmadda laga dhimo shirkadaha ka hoowl-gala xaafadaha ey ku badan tahay shaqa-la’aanta iyo cilmi-darrada.
Kuleeylihii ina dhaafay ayuu soo jeediyey baare dawladdu howshaa u xil-saartay in ugu badnaan muddo toddoba snnadood ah qidmadaha shaqaaleeynta laga dhimo shirkadaha ka howl-gala xaafadahaa, hase yeeshee lagu shuruudeeyey in ugu yaraan afar daloolow mid shaqaalaha shirkadda ka howl-galaa ku dhaqan yihiin xaafadaha la hadal hayo.
Fikirkan ayey haddaba dhaleeceeymo ka soo wajaheen heyado iyo shirkadaha qaarkood, maadaama aanu ahayn sida ey qabaan mid dardar-gelinaya sidii kor loogu qaadi lahaa goobaha shaqada ee xaafadahaa, isla-markaana uu yahay mid jah-wareer-gelinaya nidaamka tartanka baayacmushtarka iyo sidoo kale in shirkaduhu hadba meel ka guuraan oo meel kale u guuraan iyaga oo dano raadineya. Wasiirka is-dhex-galka Erik Ullenhag, kana tirsan xisbiga Shacabka ee Folkpartiet ayaa iska dheereeyey dhaleeceeyntaa, isagoona sheegay in isaga iyo xisbigiisuba aamin-san yihiin in nidaamkani uu miro dhali doono:
– Waa guulo la gaarey haddii ey dhacdo iney shirkado u guuraan xaafadaha Rinkeby iyo Rosengård, goobahaasina ey ka abuurmaan shaqooyin, sida uu sheegay.
Su’aashan ayey iminka ku hoowlan yihiin u diyaargarowgeeda saraakiisha wasaaradda dhaqaaluhu. Xisbiyada Dhexe, C iyo Mudaraatka ayaan illaa hadda wax caqabad ah ka soo sheegin fikirkaa, hase yeeshee aan ku dhawaaqin go’aankooda kama dambeeysta ah. Halka uu xisbiga KD qaadacay. Midda keliya ee uu aqbali karaana tahay in tijaabo lagu sameeyo goobo aan badneyn.
Ma ka hor iman doontaan qorshe noocaniya?
– Haa, illaa hadda waxa keliya ee uu xisbigu ku heshiiyay waa in la ogolaado tijaabo lagu sameeyo xaafado kooban.
Fikirkani wuxuu ahaa mid ey si wada-jir ah u soo ban-dhigeen dhammaan afartiina xisbi ee ku midoobey talada dalka oo aad ka mid aheydeen. Sidee ayaad is-bedelkan idinku dhacey ugu sharxaysaa dadyoowgii fikirkan taabacsanaa ee codkooda idinku ridey?
– Saddex sannadood ayaa dhowaantan laga joogaa xilligii doorashadu dhacday iyadoona baaritaannadii laga sameeyey ee aannu la qeeybsanney aaney ka muuqan natiijo wanaagsan ee middaa lagu gaari karo ama ka soo baxdey.
Qorshahani wax ma ka tari karaa kor u qaadidda sumcadda xaafadahaa?